ကော့ဒလက် Tools များလမ်းညွှန် - သတင်း Rule
ကော့ဒလက် Tools များလမ်းညွှန်
— ဘက်ထရီ Size ကို —
Milwaukee M12 Cordless Hackzall (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ချားလ်စ် & Hudson)
ဘို့ ကော့ဒလက် tools တွေ, အာဏာကိုဘက်ထရီဗို့အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်: ထိုဗို့အားမြင့်မား, ပိုပြီးတန်ခိုးနှင့် torque tool ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်.
ပိုပြီးတန်ခိုးနှင့် torque ငျလိုခငျြရာတစ်ခုခုနှင့်တူတူထင်ရစေခြင်းငှါနေစဉ်, လုပ်ခံရဖို့ trade-off ရှိပါတယ်.
မြင့်မားသောဗို့အားကော့ဒလက် tools တွေကိုနှင့်အတူ, အပိုဆောင်းအာဏာကိုနှင့်အတူ, အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အပိုဆောင်းကိရိယာတခုအလေးချိန်လာ.
ပုံမှန် 9.6 ဗို့ ကော့ဒလက်လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်အားဖြင့်များ၏ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ချိန်လိမ့်မည် 3-1/2 ပေါင်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှ $35 – $150.
တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်, တစ်ဦး 19.2 Volt ကော့ဒလက်လေ့ကျင့်ခန်းမှတက်ချိန်နိုင် 10 ၏အကွာအဝေးအတွက်ပေါင်နှင့်ကုန်ကျစရိတ် $125 – $300.
တစ်ဦး၏တိုးမြှင့်လိမ်အားနှင့်အာဏာမှန်လျှင် 19.2 Volt ကော့ဒလက်လေ့ကျင့်ခန်းမယ့်လိုအပ်, အဆက်ပြောသည်ကုန်ကျစရိတ်ကတန်ဖိုးရှိစေခြင်းငှါ. သင်တို့မူကားရံဖန်ရံခါသငျ့အိမျထဲမှာ screw နှစ်ခုမောင်းနှင်ရန်သင့်ကော့ဒလက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအသုံးပြုနေလျှင်, တစ်ဦး 19.2 အသုံးပြုခက်တဲ့အတွက် Volt ကော့ဒလက်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်နိုင်ပါကထိုက်တန်သည်မဟုတ် (ဒါကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက) နှင့်ငွေကောင်းစွာသုံးစွဲမဟုတ်. ငါ
သငျသညျတကယ်နောက်ထပ်အာဏာကိုမလိုအပ်ပါဘူး, f, တစ်စျေးသက်သာ, အလင်း-အလေးချိန်ကော့ဒလက်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်နိုင်အများကြီးပိုကောင်းသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်.
— ဘက်ထရီအရေအတွက် —
အသစ်တစ်ခုကိုကော့ဒလက် tool ကိုဝယ်ယူကြသောအခါစဉ်းစားရန်နောက်ထပ်အချက် tool ကိုအတူထည့်သွင်းလာသည်ဟုဘက်ထရီများ၏အရေအတွက်သည်.
သငျသညျအခြိနျအတိုးချဲ့ကာလအဘို့သင့် tool ကိုသုံးပြီးပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မကြာခဏအစီအစဉ်ရှိပါက, သငျသညျနှစ်ခုသာထရီအတူပါလာသည်ဟု tools တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုပေမည်.
သင့်ရဲ့ဘက်ထရီတစ်ခုခုအလယ်၌ကွယ်လွန်သင်ပြန်သင်အကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့ကြအရာကိုရနိုင်ခင်မှာကိုအားသွင်းဖို့ဘက်ထရီအဘို့အနာရီစုံတွဲတစ်တွဲစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်အခါကအလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦး tool ကိုဝယ်ယူကြသောအခါ, သေချာပါကနှစ်ဦးဘက်ထရီနှင့်အတူကြွလာစေပါ.
ဒါကြောင့်မလိုလျှင်, တစ်ဦးအပိုဆောင်းဘက်ထရီ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတက်ကြည့်ရှုနှင့်သင် tools တွေကိုအကြားကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်ကြသောအခါကပါဝင်.
— ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား —
ဘက်ထရီအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကော့ဒလက် tools တွေကိုအဘို့ရောင်းရန်ရှိပါသည်: lithium Ion (Li-Ion) နှင့်နီကယ်သတ္တု hydride (NiMH).
ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာလုပ်ပါ, အသုံးပြုတဲ့ကော့ဒလက် tool ကိုဝယ်ယူရန်ပါဘူး NiMH ဘက်ထရီ. ဟုတ်ကဲ့, ဒါကြောင့်စျေးသက်သာစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်စျေးပေါဖြစ်ပါသည်.
NiMH ဘက်ထရီမှတ်ဉာဏ်ပြဿနာကိစ္စများရှိ (သူတို့ဖြစ်ကြသည်ခင်မှာသူတို့လုံးဝဆေးရုံကဆင်းခံရဖို့လိုအပ် အားသွင်း ဒါမှမဟုတ်သူတို့တာဝန်ခံစွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံး), သူတို့အဖြစ်အများအပြားအဘို့ကြာရှည်ပါဘူး တာဝန်ခံသံသရာ (ဘက်ထရီမြန်သေဆုံး), ထိုသူတို့နှင့်ညီမျှဗို့ထက်နိမ့်ခိုးဖြစ်ပါသည် Li-Ion ဘက်ထရီ.
— ဘက်ထရီနှင့် tool ကို သိုလှောင်ခြင်း —
သင့်ရဲ့ကော့ဒလက် tool ကိုပိတ်ထားလျှင်ပင်, ဒါကြောင့်ဘက်ထရီကနေစွမ်းအင်ကိုသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုဆှဲမညျ.
ရေးဆွဲခံရသည့်စွမ်းအင်၏ပမာဏအနည်းငယ်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ဒါကြောင့်ကာလ၏သင်တန်းကိုကျော်သိသိသာသာငွေပမာဏအထိကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကော့ဒလက် tools တွေကိုပယ်ရှားသောအခါ, ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားရန်သေချာစေပါ; ဤသူသည်သင်တို့ကြောင့်လိုအပ်သည့်အခါဘက်ထရီစွဲချက်တင်ကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီပေးပါမည်.
ထိုအတွက်သင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုစောင့်ရှောက်မနေပါနဲ့ charger ကို အချိန်ရဲ့တိုးချဲ့ကာလအဘို့. ဖြစ်ဆိုသောသူအချို့အားသွင်းရှိပါတယ်နေစဉ် “စမတ်” ဒီအကြောင်း, ဒါပေမယ့် charger ကိုသင်၌ကော့ဒလက် tool ကိုဘက်ထရီသိုလှောင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုသင်တို့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်မကျင့်လျှင်ထက်သေဆုံးသူတို့အားလမ်းပြမည်အဖြစ်. သင့်ရဲ့ဘက်ထရီသိုလှောင်သည့်အခါအပူမှာသူတို့ကိုသိုလှောင်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အအေး. အေးသောရာသီဥတုရေရှည်သင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုထိခိုက်စေမည်မဟုတ်, ဒီ tool ကိုအသုံးပြုခံရသောအခါပေမယ်ရရှိနိုင်အာဏာပမာဏကိုလျော့ကျပါလိမ့်မယ်.
မြင့်မားသောအပူအပြီးအပိုင်သင့်ရဲ့ကော့ဒလက် tool များ၏ဘက်ထရီကိုဖျက်ဆီးနိုင်.
မြင့်မားသောအပူရှောင်ကြဉ်ပါ, နှင့်အလွန်အမင်းပူပြင်းကြောင်းဧရိယာ၌သင်တို့၏ဘက်ထရီကိုအားသွင်းကြဘူး, ဒီအပြီးအပိုင်ဘက်ထရီပျက်စီးစေနိုင်သည်.
အများစုကပိုမိုမြင့်မားဆုံးကော့ဒလက် tools တွေကိုယခုဘက်ထရီအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာအလွန်တိုတောင်းသောကာလအတွက်စွဲချက်တင်ခံရဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းအဆင့်မြင့်အားသွင်းအတူပါလာ; မကြာခဏအကြောင်းထဲမှာ 15 မိနစ်.
နှိုင်းယှဉ်, တစ်ဦးစံ charger ကိုတက်ယူနိုင်ပါသည်3ဘက်ထရီအားသွင်းဖို့နာရီ.
သင်သည်သင်၏ tool တစ်ခုအတွက်အမြန်-charging ဘက်ထရီလိုလျှင်, တစ်ကော့ဒလက် tool ကိုရယူမှကြိုတင်ရရှိနိုင်သော charging ရွေးချယ်စရာသို့ကြည့်ရှု.
— တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ် Pick —
စစ်ရေးလေ့ကျင့်ဝယ်ယူတဲ့အခါသင်တသမတ်တည်းတူညီဘက်ထရီအရွယ်အစားနှင့်အတူ tool ကို၏တူညီသောအမှတ်တံဆိပ်ယ်ယူလိုလျှင်, လွှချုံ့, reciprocating လွှ, ဝက်အူလှည့်, စသည်တို့ကို, သင်သည်သင်၏ tools တွေကိုအပေါငျးတို့သကြားကဘက်ထရီနှင့်အားသွင်းဝေမျှနိုင်ပါလိမ့်မည်.
ဒီရရှိနိုင်ဘက်ထရီများ၏အရေအတွက်တိုးပွါးလိမ့်မည်နှင့်ကသငျသညျတရားစွဲဆိုဘက်ထရီထဲက run ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုသေချာ.
23285	0 ဘက်ထရီ, ဘက်ထရီအားသွင်း, စီးပွားရေး, ကော့ဒလက်, စူး, သင်ကြားခြင်း, lithium-ion ဘက်ထရီ, power supply, Tools များ
←5တစ်ဦးပိုင်ဆိုင်၏ Cons0APR Credit Card ကို Python နှင့်ကနေဒါ၌နှစျကလေးငယ်များသေဆုံးထွက်ပြေးလွတ်မြောက် →